Rasaas laga maqlay labo magaalo oo Ivory Coast ku yaalla - BBC Somali
Rasaas laga maqlay labo magaalo oo Ivory Coast ku yaalla
Xabbado ayaa laga maqlay labo magaalo oo ku taalla dalka Ivory Coast waxaana looga shakisan yahay askar amar diido samaysay, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ilo ka tirsan millatariga dalkaas.
Askartan amardiidada samaysay ayaa hubka ka qaatay labo saldhig booliis oo ku yaalla magaalada labaad ee dalkaaas ugu wayn ee Bouake, waxayna la wareegeen goobihii laga gali jiray, sida ay wararku sheegayaan.
Waxaa sidoo kale rasaas laga soo sheegay magaalada Daloa.
Madaxwaynaha dalkaas Alassane Ouattara ayaa awoodda la wareegay sanadkii 2011-kii markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeye.
Magaalada Bouake waxay xuddun u ahayd kacdoonkii lagu doonayay in xilka lagaga wareejiyo madaxwaynihii isaga ka horeeyay Laurent Gbagbo oo Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyadu ay u haysto in uu gaystay dambiyo dagaal.
Askar wadata qoryo Aakay ah ayaa rasaas ku furay xafiisyada warbaahinta dawladda ee magaaladaas ku yaalla waxayna gacanta ku dhigeen wadada dhanka galbeedka ka soo gasha magaalada Bouake sida uu BBC-da u sheegay qof deegaanka ah oo aan rabin in magaciisa la sheego.
Ami Soro oo macallin ah ayaa sheegay in magaaladu ay cidlo tahay oo ay dadkii kala xaroodeen, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters
Waxaa kale oo la sheegay in ay askar joogaan wadooyinka magaalada waqooyiga ugu wayn ee Korhogo.